Iindlela ezili-10 ezizezona zilungileyo kwiSpotify kwi-Android | I-Androidsis
UDaniPlay | | Ukusetyenziswa kwe-Android
I-Spotify yenye yezona nkonzo zibalulekileyo zokusasaza iminyaka kunye nokubonelela ngezicwangciso ezahlukeneyo zokuthatha ithuba, nokuba simahla okanye sihlawulwe. Sele edlulile isithintelo sabasebenzisi abazizigidi ezingama-350 ngenyanga, kodwa ufuna ukuqhubeka nokukhula kwihlabathi liphela ngokuba neekhathalogu ezinkulu ezikhoyo.
Le nkonzo ayisiyiyo kuphela efumanekayo, ngakumbi ukuba ujonga izihloko ezahlukeneyo kunye nabo bafuna ukutsiba kumculo ngokusebenzisa amaqonga. Dibana neendlela ezili-10 ezilungileyo zeSpotify, Zonke ziyafumaneka kwinkqubo ye-Android kunye nokubhaliswa kwangaphambili kwiimeko ezininzi.
UNIKEZELO: Ungazama iAmazon Music Unlimited simahla kule khonkco.
3 Amazon Umculo
7 Umculo we-YouTube
9 Shark - Umculo
Ngokudibeneyo neSpotify, yenye yeenkonzo ezinelona nani likhulu lee-audios ezikhoyo. I-SoundCloud igcina ii-audios ezingaphezu kwezigidi ezingama-200, kubandakanya ii-audios zomculo kunye neepodcasts, zakutshanje eziqhutywa ziingcali kunye neenkqubo zikanomathotholo ezivela naphi na emhlabeni, kubandakanya nabantu abaninzi baseSpain.
Iqonga linamagcisa amaninzi awaziwayo, kodwa nezo ungazifumaniyo kwabanye, ukunika umsebenzisi ithuba lokuba akwazi ukumamela naluphi na uhlobo lwesandi. Amagcisa amaninzi abelana ngezinto zawoNokuba ziingoma, zizandi, phakathi kweminye imisebenzi.
I-SoundCloud inenguqulo yasimahla, nangona iphinda yongeze imirhumo emibini efana ne-SoundCloud Go ye-5,99 euro kunye ne-SoundCloud Go + ye-9,99 euro ngenyanga. Ungazama zombini ngaphandle kwesibophelelo, kodwa ngeentsuku ezisi-7 kwinyanga yokuqala kunye nenyanga enye yokubhaliselwa kunye, bobabini babelana ngomxholo, kodwa okokugqibela kufikelela kuwo wonke umxholo wenkonzo ngaphandle kwemida.
I-SoundCloud-Umculo, uluhlu lokudlala kunye neepodcast
Ngenye yezicelo ezineenkcukacha ezinkulu kunazo zonke, malunga neengoma ezingama-70 ezigidi ifumaneka nakoluphi uhlobo okhangela ngalo mzuzu. Yongeza ukudlala ngaphandle kweintanethi, ukutsiba okungenamda kunye nolunye ukhetho olongezelelekileyo ukuba usebenzisa indlela yokuhlawula iTidal, nokuba unenguqulo yenyanga enye.
Abantu abasemva kweTidal ngabadali bomxholo womculo, yiyo loo nto beye bancoma enye yeendlela ezizezinye zeSpotify, mhlawumbi eyona ivakala incinci kuninzi ngenxa yegama layo. Umgangatho wesandi ubalaseleUkusukela oko ii-audios zilayishwe eqongeni ukusuka ku-192 ukuya ku-320 Kbps
UTidal unevidiyo engaphezulu kwama-250.000 esemgangathweni ukuvelisa kwakhona, ukongeza ukubeka kwinkonzo inani elikhulu lee-audios zemveli, iHip Hop kunye nezinye iintlobo. Inguqulelo yeNkulumbuso ineendleko ze-9,99 euro ngenyanga, ngelixa inguqulelo ye-Hi-Fi inyukela kwi-19,99 euro ngenyanga.
I-Amazón yangena kwihlabathi lokusasaza umsindo ngo-2007, eneqonga lokuvelisa kwakhona naluphi na uhlobo lomxholo ngaphakathi kwenkonzo. IAmazon Music kudala yayisinye sezicelo kunye nokhuphelo kunye nemirhumo enkosi kumxholo obanjiweyo, ukongeza kule intsha iyongezwa.
Isiseko sedatha yomculo singaphezulu kwezigidi ezi-2, kufuneka ithathe indawo xa ifuna ukugqibelela njengeSpotify (ngaphezulu kwezigidi ezingama-70 zeengoma). Ukuba ufuna ukhetho olubanzi ngakumbi, kuya kufuneka ufumane iAmazon Music Unlimited, enezigidi ezingama-70 zeengoma kunye nokufikelela kumxholo okhethekileyo, zonke ziyi-9,99 euro.
Inkonzo yoMculo weAmazon yenye yeendlela ezizezinye zeSpotify Logama nje ufumana Unlimited, intlawulo iyafana neNkulumbuso yenyanga yesicelo esiluhlaza. Okwangoku unenyanga yasimahla ukuba awungomsebenzisi oyintloko weAmazon, nangona ekugqibeleni ungafumana iinyanga ezine.
Umculo weAmazon: Mamela iipodcast kunye nomculo omtsha
Enye yeenkonzo zokusasaza ezaziwayo yiPandora, efana kakhulu neSpotify kwaye ugqibelele ukuba ufuna ukufumana umculo wegcisa elaziwa kakhulu. I-Pandora ekuhambeni kwexesha ibandakanya amagcisa amatsha, kangangokuba isisiseko sayo kubalulekile ukwanelisa abasebenzisi bayo.
I-Pandora ivumela ukukhangelwa kweengoma ngumculi kunye nemixholo, ukudlala eqongeni, ukumisa umkhondo esifuna ukuwususa ukuba asiyithandi. Imiyalelo yelizwi ingasetyenziswa ukuba ufuna ukukhangela ngokukhawuleza, Zonke ngaphandle kokusebenzisa ikhibhodi ekwiskrini.
Iinkonzo zokubhaliselwa zahlukile, Konke oku kuyakwandisa imisebenzi yeqonga elizinzileyo enkosi kwizicwangciso ezikhoyo. Inkonzo yePandora Plus inexabiso le-4,99 euro, iNkulumbuso inyukela kwi-9,99 euro, ukongeza ekubeni ezinye izicwangciso zosapho kunye nabafundi.
IPandora -Ukusasaza uMculo, iRadio kunye neePodcasts
Ukuba ujonga enye indlela yasimahla yeSpotify ngokungathandabuzekiyo yenye yeenkonzo zokuhambisa ezihamba phambili. Inezigidi zeengoma, ukufikelela okungenamkhawulo kwaye eyona nto intle kakhulu kukwazi ukwabelana ngefayile nganye nabanye abasebenzisi, ukuba nje unesicelo kwezi zixhobo.
Ujongano lulula, kunye neenketho ezisisiseko xa kuziwa ekudlaleni iaudiyo, nokuba kukumamela ngalo mzuzu okanye ukwenza uluhlu lokudlala olwenzelwe wena. Isicelo songeza intengiso, eyamkelwe kakuhle ukuze liqonga lasimahla kwaye ngaphandle kwentlawulo inyanga nenyanga.
Enye yeengxaki ezimbalwa zesicelo sokumamela iingoma Kuya kufuneka unonxibelelwano lwe-Intanethi, nangona enye indlela enokwenzeka ngayo kukuba ube nakho ukuyikhuphela ngaphambili. I-SongFlip ineentlobo ezininzi zomculo, ngaloo ndlela inika umsebenzisi uluhlu olubanzi lwezinto ezinokwenzeka xa umamele umculo.
Yindlela elungileyo eya kwiSpotify, kuba iDeezer idibanisa izigidi zeengoma ifikeleleka wakuba ungenise inkonzo yokusasaza umculo. Isicwangciso sasimahla sentengiso sinokusetyenziswa ixesha elide, nangona enye yeendlela onokuzikhetha kukususa ngentlawulo yenyanga.
I-Deezer isekwe kwisazisi somculo, ukuze ikwazi ukubamba isandi kwaye isikhangele kwindawo yogcino lwedatha, ebanzi kakhulu. Isiseko sesicelo sijikeleze iingoma ezingama-56 ezigidi, Zonke ziyaphulaphulwa, kufuneka zifumane iakhawunti yePremiyamu malunga nee-euro ezingama-9,99 kwisicwangciso esiqhelekileyo.
Inkonzo yeDeezer isebenza kwiqonga lewebhu, ngokusebenzisa izicelo kwi-Android nakwi-iOS, ukufikelela kumathuba amathathu, eyiakhawunti yasimahla, i-9,99 euro yesicwangciso esiqhelekileyo kunye nee-euro ezingama-14,99 zesicwangciso sosapho, ezingama-akhawunti zizonke, enye kuye wonke umntu ekhaya.
Deezer -Umculo, uluhlu lokudlala kunye neePodcasts
Umthuthukisi: Umculo kaDeezer
Ividiyo enkulu yasungula inkonzo yokusasaza yeaudio njengenye yeengqaqa zokuphulaphula umculo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeendlela ezizezinye zeSpotify. Igqitha kwizigidi ezingama-70 zeengoma, zonke ziyafikeleleka nanini na xa ufuna, ukongeza ekubeni nakho ukwenza uluhlu lokudlalwayo ngokwesiko.
Ukongeza, ngeakhawunti uya kuba nakho ukufikelela kwiividiyo zomculo, ezifanelekileyo iifowuni, iikhompyuter kunye naluphi na uhlobo lwesixhobo, kubandakanya iipilisi, phakathi kwabanye. Umculo ku-YouTube wenziwe ukunceda ukwahlula abo bafuna ukuthumela umsebenzi wabo umculo, ndikunika isiqwenga sepayi.
Inkonzo yeNkulumbuso iya kwahluka, konke oku ukuba ufuna isicwangciso esiqhelekileyo esiyi-euro ezingama-9,99 ngenyanga, Isicwangciso somfundi siyehla siye kwi-5,99 euro kwaye isicwangciso sosapho siyi-11,99 euro ngeeakhawunti ezintlanu. Umculo ku-YouTube ukhule ngokuncomekayo kwiinyanga nje ezidlulileyo, kunye nezigidi ezininzi zeengoma.
I-Apple Music yenye yeenkonzo zokusasaza ezikhoyo ukumamela nayiphi na ingoma ujonge nasiphi na isixhobo se-Android. Ineengoma ezingaphezu kwezigidi ezingama-60 zokumamela nangaliphi na ixesha ngonxibelelwano lwe-Intanethi, nokuba kungoku nge-Wi-Fi okanye nge-4G / 5G.
Okwangoku lelinye lamaqonga afanelekileyo okufumana le ngoma uyikhangela kangako, ukukhangela ngokukhawuleza, kufuneka yenze uluhlu lwezomculo, ezona zimamele iingoma nokunye okuninzi. I-Apple Music yongeza imisebenzi emininzi, ngaphandle kokuba ngumnqamlezoNokuba yeyiphi kwi-Android, unenkonzo yewebhu kwaye kunjalo, nakwinkqubo ye-iOS.
Inkonzo ye-Apple Music ibonelela malunga neenyanga ezi-3 simahla ukuyivavanya, ngaloo ndlela inexesha elaneleyo lokufunda ngakumbi malunga nekhathalogu. Ubhaliso lwe-Apple Music zii-9,99 ze-euro zesicwangciso esisiseko, i-4,99 i-euro yabafundi kunye ne-14,99 ye-euro ukuba ufuna ukufumana isicwangciso sosapho ukuya kubantu abayi-6.
Umthuthukisi: Apple Inc.
Shark - Umculo
Nje ukuba uyifikelele, iya kubonisa ujongano olulula kunye nokufikelela kumxholo womculo, konke ngaphandle kokubhaliswa kwangaphambili, nangona kungcono ukubhalisela ukuthintela intengiso. Nje ukuba ubhalise uyakuyiphepha intengiso phakathi kwengoma nengoma, yiyo enye yamandla alolu hlelo lokusebenza.
Shark -Umculo wongeza iingoma ezininzi ekugqibeleniNangona ifuna ukongeza ngakumbi ukuba ifuna ukukhuphisana nezinye iinkonzo ezinkulu. Lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukumamela iingoma mahala kwaye ngaphandle kokwenza intlawulo yenyanga okanye yonyaka.
Yenye yeenkonzo zomculo ezindala kwi-Intanethi, ekuhambeni kwexesha ikwazile ukuziqhelanisa nokufikelela kwiinkqubo ezisebenzayo zeselfowuni. Inethiwekhi yomculo, apho ungayifumana khona ingoma oyikhangelayo, kuba ine-injini yokukhangela enamandla kunye neefilitha zokucokisa ukukhangela.
Nje ukuba ungene unenxalenye yeengoma ezicetyiswayo luluntu, kufanelekile ukuba ufuna ukumamela iingoma ezaziwayo okanye amagcisa esizukulwana esitsha. Kukho izihloko zazo zonke iintlobo, kubandakanya abo bafuna ukwenza utsiba lodumo kwaye ngubani onokulayisha umxholo kuLast.fm simahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Iindlela ezili-10 eziphezulu zeSpotify kwi-Android